Ogaden News Agency (ONA) – Hawlwadeenada Jaaliyada S.Ogadeniya ee Sweden oo shir mihiim ah isugu yimid
Hawlwadeenada Jaaliyada S.Ogadeniya ee Sweden oo shir mihiim ah isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ January 20, 2013
Waxaa magaaldaStockholmee casimda dalkaSwedenlagu qabtay shir ay ka soo qayb galeen hawlwadeenada Jaaliyada Soomalida Ogadenia ee Sweden oo ka kala yimid faracyada ay ka koobatahay Jaaliyada guud ee Soomlida Ogadeniya ee wadanka Sweden.
Dalka Swedenwaxaa ka jira 8 farac ama unug Jaaliayadeed oo ka kala hawl gala gobalada kala duwan ee wadankan Sweden, unugyadaas oo dhamantood hoos yimaada Jaaliyada wayn ee xarunteedu tahay magaalada Stockholm.
Hadaba shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaarka mid ah gudomiyayaasha iyo hawl wadeenada unugyada Jaaliayadaahaa kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay lokalka Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee wadankan Sweden oo ku yaala magalada Stockholm. Shirka oo qorshihiisu ahaa wadatashi uu maamulka cusub ee dhawan loo dortay Jaaliyada Sweden uu la samaynayay hawl wadeenada iyo Gudomiyayasha faracyada Jaaliyda dalkan Sweden ayaa barqinimadii shalay Sabtidii ka biloowday xarunta Jaaliyadu ay ku leedahay magalada Stockholm, shirkaas oo socday ilaa xalay fiidnimadii ayaa waxaa looga hadlay qodob badan oo mihiim u ah Jaaliyada Sweden iyo Halganka guud ee ay Jabahada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ee JWXO hogaaminayso. Shirka waxaa aayado quraan ah iyo wacdi gaaban ku furay Sh C/wahaab ka dibna waxa la sii guda galay ajandihii shirka oo Gusoomiyaha jaaliyadaha Sweden mudane Haybe kadibna uu ka kahriyay goobta, ka dibna waxaa la bilaabay in laga doodo kolba qodobada ugu mihiimsanaa oo ay ka mid ahayeen sidii loo fashilin lahaa loogana hor tagi lahaa anshax xumada iyo cabudhinta Gumaysiga Itoobiya uu ku haayo Shacabka Soomalida Ogadenia. Qodobkan oo runtii qaatay sacado isla markaana xubin kasta aragtidiisa ka dhiibtay ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay in si wada jir ah looga hortago siyaasadan qaawan ee brobagaandada madow iyo macangagnimadu ku jirto ee gumaysiga uu bilaabay. Waxaa sidoo kale Jaaliyada iyo Hawl wadeenaduba qiimayn ku sameeyeen si wayna loo faaqiday tabihii loga hor tagi lahaa dhaq dhaqaa kasta oo Itobiya iyo daba dhoonkooduba isku dayaan inay la yimadan ama ay ka bilaaban Sweden iyo wadamada dariska la ah Sweden.
Wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah oo watay xamaasad intaa la eg oo baryahan ka dhaca Sweden tan iyo intii la soo doortay Gudiga Jaaliyada ee cusub waxaana hoosta laga xariiqay diyaar garoow balaadhana loo galo in gumaysiga Itoobiya oo aan uga soo cararay guryahanagii ayna nagaga daba imaanin Sweden. Qodobkan oo runtii xamaasadiisa watay ayaa la isku raacay taageerada Shacabaka Soomalida Ogadeniya ee aan hadli karin in garab istaagiisu iyo in loo doodo ay muqadas tahay lama tabtaan ah.
Waxaa sidoo kale maamulka Jaaliyadu soo bandhigay Habkii ay u shaqayn lahayd Jaaliyadu iyo dhamaystirka dhaman maamulka Jaaliyada iyo Unugyada waxaana la isku raacay in la dardar galiyo shaqada Jaaliyada lana dhamaystiro Gobalda ka dhiman Sweden ee an wali Unug buuxda oo Jaliyadeed samaysanin arintaas oo loo xilsaaray gudi gaar ah oo uu hogaaminaayo mudane Xuseen oo ah Hogaanka Abaabulka Jaaliyada iyo ku xigeenadiisa, waxaa sidoo kale Gudomiyayasha Unugyada iyo Hwalwadenada shirka ka soo qayb galay laga sugaya inay shirkan oo kale ku qabtan gobalday ka kal yimaadeen si dhaman xubnihii ay horjogayaasha u ahayeen loo wada hawl galiyo si loo fashiliyo tabaha gumaysigu la maagan yahay Jaaliyadaha rer Ogadeniya ee dibadaha ka hawal gala korna logu qaado shaqada loo hayo shacbka dulman ee Ogadenia.
Waxaa sidoo kale lagu dhamaystiray dhamaan hogamadi wax ka dhinayeen sida Culima awdiinka ,Garsoorka iyo Cadaalada.
Isku soo wada xoodhiyoo Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee wadan Sweden waxay biloowday qorshe yaal cusub oo Halganka xaqa ah ee shacabka Somalida Ogadeniya uu ku jiro kor loogu qaadayo waxaana laga dareemayaa dhamaan Gobalda Sweden ay ka hawlgasho Jaaliyadu dhaq dhaqaaqyo xoogan sidii kor loogu qaadi laha wax-qabadka jaaliyadaha.
Ugu danbayntii waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka (NINKII DHOOF KU YIMID BAY GEERIDU DHIBAYSAA WAKHTIGII DHAQAAQYOO WUU DHAMAANI DOONA)